ImfonomfonoAppTracking: I-SDK yeSelfowuni yokuFakela iZibonelelo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 22, 2014 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking ibonelela nge-SDK (i-Android okanye i-iOS) ukudibanisa ngokulula ingxelo kuyo nayiphi na inethiwekhi yentengiso okanye iqabane lokupapasha kwisakhelo sophuhliso. Nje ukuba i-SDK idityaniswe, uyakwazi ukulandelela ngokwenyani imicimbi evela kulo naliphi na iqabane lomntu wesithathu. IselfowuniAppTracking ayixhomekeki kwi-UDID njengendlela yokunikezela-baxhasa iindlela ezizezinye zokuthobela ezihambelana nemigaqo-nkqubo yevenkile.
Landa ukufakwa kwesoftware kunye nokuzibandakanya komsebenzisi kwimikhankaso yakho yentengiso yeselfowuni.
MobileAppTracking inokubonelela ngofakelo kunye nedatha yokuguqula ngexesha elililo, ikwenza ukuba ukwazi ukwandisa amajelo akho okuthengisa kubudlelwane bakho bentengiso. Rekhoda ukuthengisa, ukuthengwa kweapp, ubhaliso, ukugqitywa kwenqanaba, kunye nenye idatha yokumisela ixabiso lobomi (i-LTV) kunye nokugcinwa komsebenzisi. Unokulandela umkhondo kwii -apps kwifowuni efanayo!
Isebenza njani iMobileAppTracking
Ikhonkco lokuKhangela -Nika ikhonkco elikhethekileyo kumthombo ngamnye wentengiso.
Intengiso yefowuni - intengiso icofiwe kwaye umsebenzisi uchongiwe ukuprintwa kweminwe yesixhobo.
Indawo yentengiso yeApp -Umsebenzisi ufaka usetyenziso lwakho.
Ukutshatisa -Umsebenzisi uvula usetyenziso kwaye i-SDK ichonga umthombo ngokuprinta iminwe.
Ukulandela umkhondo kwesicelo seSelfowuni liqonga lokulandela umkhondo elingakhethi cala elibonelela ngokulandela umkhondo wexesha-lokwenyani kunye nokwenza ingxelo ngentengiso yeapp. Umkhondo uthungelwano lweentengiso ezininzi, abapapashi, kunye namahlakani ngokudibanisa i-SDK enye. Ukulandela umkhondo kwesicelo seSelfowuni liqonga lakho loxolelwaniso kuwo onke amaphulo entengiso eselfowuni.
Unokulandela umkhondo ukuya kuthi ga kwizibonelelo ezingama-50,000 0.002 simahla inyanga nenyanga ukuqala kwaye emva koko uhlawule i- $ 2 ngembonakalo nganye emva koko. Ixabiso lamavolumu linikezelwa kulwabiwo olukhulu lweselfowuni olungaphezulu kwezigidi ezi-XNUMX okanye nangaphezulu.
tags: imbekouthungelwano lwentengiso oluhlanganisiweyoltvuthungelwano lweentengiso eziphathwayoezipapashi zentengiso eziphathwayoUhlalutyo losetyenziso lweselfowuniusetyenziso lwefowuniusetyenziso lweselfowuni sdkiselfowuni yokufakaUkunika ingxelo ephathekayoUkuhambisa ingxelo sdkUmsebenzisi weselfowuni ltvsdk
Jan 26, 2015 kwi-4: 24 AM
Ndiyazibuza ukuba yeyiphi i-SDK ekhethekileyo yokuThengisa eya kudinga ukudityaniswa kumdlalo ngaphambi koSungulo oluSoft. Kwaye nceda ucacise ukuba yeyiphi iminyhadala yomdlalo eza kulandelwa yi-SDK.